MyanCare | ကလေးတို့ ဝတဲ့အခါ ဘာပြသနာတွေဖြစ်နိုင်လဲ?
ကလေးတို့ ဝတဲ့အခါ ဘာပြသနာတွေဖြစ်နိုင်လဲ?
by myatlynn | Aug 20, 2020 | Child Health, Nutrition
ခုခေတ်မှာ အသင့်စားသုံးနိုင်တဲ့အစားအစာတွေ၊fast food တွေ၊ဆီကြော်တွေက ရေပန်းစားလာတော့။ကလေးတို.ရဲ့အဝလွန်ပြသနာတွေလည်း ပိုတွေ.လာရပါတယ်။
ကလေးတွေကို အစားများများစားစေချင်တယ်၊ကြီးထွားဖွံဖြိုးစေချင်တယ် ဆိုတာမိဘအားလုံးဖြစ်ချင်ကြတဲ့အရာပါ။ဒါကြောင့်ကလးတို.အစားကောင်းပြီဆို မိဘတွေက သဘောကျပြီး၊ကိုယ့်ကလေးကို များများစားစေချင်ပြီးပိုကျွေးတတ်ကြတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျန်းမာစေတဲ့ အာဟာရဖြစ်စေတဲ့ အစားအစာများများ ကျွေးတာက ကလေးရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖွံ.ဖြိုးမှုနဲ့ ဉာဏ်ရည်ဖွံ.ဖြိုးမှုအတွက်ကောင်းပေမယ့်ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုးကျိုးပိုများတဲ့အဆီများ၊အငံဓာတ်များတာတွေ၊အထပ်ထပ်ကြော်ထားပြီးသားဆီကိုအသုံးပြုတာတွေ၊သကြားတွေလွန်လွန်ကဲကဲပါတာ စတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားမိရင်တော့ ကလေးအတွက်အဝလွန်ခြင်းတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင် မကျန်းမာတဲ့ အမူအကျင့်တွေကို ကျင့်သားရသွားစေသလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
အချိုဓာတ်များလွန်းတဲ့အစားအစာတွေက ကလေးရဲ့သွားကျန်းမာရေးအတွက်လဲ ရန်သူပါပဲ။
အဝလွန်ခြင်းဟာလူကြီးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကလေးရဲ့အသက်အလိုက် မျှတတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့အရပ်ရှိလား?
အာဟာရတန်ဖိုးပြည့်ဝပြီး ကျန်းမာစေတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ?